बिहिवार, २३ जेष्ठ २०७६,	- सञ्चिता घिमिरे.
ललितपुर, २३ जेठ ।
झण्डै १६ वर्ष पहिलेदेखि रातो मछिन्द्रनाथको मूल पूजारीका रुपमा देवताको सेवामा लाग्दै आउनुभएको कपिल बज्राचार्य ६७ वर्षको हुनुभयो । उहाँ २२-२३ वर्षको उमेरदेखि मछिन्द्रनाथको पुजारीका रुपमा देवताको सेवा गर्दै आउनुभएको छ ।
बज्राचार्य आफूलाई रातो मछिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउनेमध्येका एक गुरु बन्धुदत्त बज्राचार्यको सन्तान भएको दावी गर्नुहुन्छ ।
५ दशक देवताको नाममा :
उहाँले देवताको सेवामा बिताउनुभएको यो पाँच दशकमा पूजा विधिमा परिवर्तन आएको छैन । पूजा गर्ने विधि उही र रातो मछिन्द्रनाथलाई खुशी बनाउन सके वर्षा हुने विश्वास पनि उस्तै छ ।
रातो मछिन्द्रनाथको मुख्य जात्रा हुने स्थान पाटन (अहिलेको ललितपुर महानगरपालिका) को संरचनामा भने आकाश–जमीनको परिवर्तन आइसकेको छ । पहिले खेत नै खेतले भरिएको पाटन अहिले घरैघरले भरिएको छ ।
पहिले पानी परे खेती गर्न पाउने आशा गर्ने किसानका सन्तान अहिले कोही व्यापारी-व्यवसायी त कोही जागीरे छन् । कतिपय रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेशमा छन् ।
गर्वको महशुस :
अहिले पनि मछिन्द्रनाथका सेवकहरु (गुठीका भाषामा रकमे) मछिन्द्रनाथको जात्रा अघि र जात्राको अवधिभर हुने विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउँदा गर्वको महशुस गर्छन् । धर्म र संस्कृति जोगाउनु उनीहरु आफ्नो अभिभारा सम्झन्छन् । यहाँका दक्ष जनशक्तिले खुबी र कामअनुसार पारिश्रमिक नपाउँदा पनि धेरै दिन देवताको काममा खर्चन्छन् ।
मीननाथको रथमा बेतले बाँध्दै आउनुभएका चिरीकाजी महर्जनले भन्नुभयो – “सिङ्गो ललितपुरको इतिहास जोगाउन पाउँदा गर्व लाग्छ ।”
ज्योतिष दैवज्ञ कीर्तिमदन जोशी झण्डै चार दशक पहिलेसम्म वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिनमा मछिन्द्रनाथको रथारोहण गरेपछि त्यही दिन वा भोलिपल्ट पुल्चोकमै रहेको मण्डप पाटीसम्म रथलाई लग्ने गरेको स्मरण गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “मलाई याद हुँदासम्म पनि कहिले रथारोहण भएकै दिन त कहिले भोलिपल्ट मण्डप पाटीसम्म रथ लगिन्थ्यो ।”
चार दशक पहिलेदेखि साङ्केतिक रुपमा मात्रै रथलाई पाटीसम्म पुर्याउने गरिएको छ । पञ्चसूत्र धागोलाई साङ्केतिक रुपमा तान्ने गरिएको छ । साङ्केतिक रुपमा रथ तान्दा मितव्ययी हुने भएपनि संस्कृतिको निरन्तरता नहुने उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “एक–दुई वटा प्रचलन गर्दै कतै रथ तान्दा नै खर्चिलो भयो भनेर साङ्केतिक रुपमा मात्रै तानिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।”
सम्पत्तिको यकिन विवरण गुठीसँग छैन !
रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालनका क्रममा दुई पटक साइत हेर्ने गरिएको छ । एक पटक बुङ्गमतीबाट पाटन ल्याउन र अर्काे पटक थट्टिटोलबाट जावलाखेल लैजान । यहाँका जोशीहरुले मङ्गलबजारको सोर्हखुट्टे पाटीमा बसेर साइत हेर्ने गरेका छन् ।
पहिले साइत हेर्ने दिनमा हिरण्यवर्ण महाविहार (गोल्डेन टेम्पल) बाट ३२ जना गुरुजू सोर्हखुट्टे आइपुग्थे । तीमध्ये १६ जना वरिष्ठ गुरुजू एक-एक वटा थाममा बस्दथे । उनीहरुले साइत हेर्ने अवधिभर देवताको प्रार्थना गर्थे । अहिले धेरै वर्षदेखि गुरुजूहरु आउन छाडेको जोशीले बताउनुभयो ।
मछिन्द्रनाथका फरकफरक कामका लागि फरक समुदायका ‘सेवक’ को जिम्मेवारी हुन्छ । उनीहरुको कामको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार गुठी संस्थानले दरबन्दी छुट्टाएको छ । अहिले कतिपय रकमे दरबन्दीभन्दा कम मात्रै कार्यरत छन् ।
गुठीले साइत हेर्न चार ज्योतिषको दरबन्दी कायम गरेको छ । गणक, लेखक, स्रोता र दर्शकको व्यवस्था गुठी संस्थानमा रहेको छ । धेरै वर्षदेखि दुई जना मात्रै ज्योतिषले मछिन्द्रनाथको साइत हेर्दै आएका छन् ।
संस्कृतिको निरन्तरता :
प्रमुख ज्योतिषको सल्लाहमा अरु दुई जना पनि नियुक्त गर्नुपर्नेमा ज्योतिष दैवज्ञ जोशीको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो – “संस्कृतिको निरन्तरताका लागि पहिले जसरी गर्दै आएको हो त्यसैगरी गर्नुपर्छ । जति जनाले गर्दै आएको हो अहिले पनि त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ ।”
मछिन्द्रनाथको जात्राका लागि बुङ्गमतीबाट देवतालाई पाटन ल्याइन्छ । यहाँ ल्याएपछि रथ निर्माण, रथारोहण र रथ यात्रा हुँदै आएको छ ।
रथ यात्राको बाटो उही छ । तिथिका आधारमा रथलाई पाटनका विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गराइन्छ । रथ पुगेको स्थानमा पुगेको दिन छोय्लाभूु (प्रारम्भिक जात्रा) र त्यसको भोलिपल्ट मूल जात्रा (भुज्याः) गरेर हर्षोल्लासका साथ जात्रा मनाइन्छ ।
मछिन्द्रनाथको रथयात्रा हुने ठाउँमा पहिले रथ गुड्न पुग्ने ठिक्कको ‘ट्र्याक’ रहेको यहाँका बूढापाकाले बताउँदै आएका छन् । ‘ट्र्याक’ ले गर्दा रथ ट्र्याकबाट बाहिर जान पाउँदैनथ्यो । रथले घरलाई छुने सम्भावना पनि थिएन । समयअनुसार अहिले यहाँका भौतिक संरचना परिवर्तन भइरहेको छ ।
पहिलेका ती ट्र्याकहरु अहिले मासिसकेको देख्न सकिन्छ । अहिले जतासुकै सडक कालोपत्रे छ । उहाँले भन्नुभयो – “चार दशक पहिलेदेखि नै ती ट्र्याक हराइसकेका छन् ।”
मछिन्द्रनाथको जात्रा शुरु हुँदा पहिले बुङ्गमतीबाट नै रथमा राखेर पाटन ल्याइन्थ्यो ।
के थियो इतिहास ?
लामो बाटो हुँदा खर्चिलो र समय बढी लाग्ने भयो । मल्लकालमा नै बार्ह वर्षमा मात्रै बुङ्गमतीबाट ल्याउँदा रथमा राखेर ल्याउन थालिएको हो । दक्षिणायन हुँदा बुङ्गमती र उत्तरायन हुँदा पाटनमा मछिन्द्रनाथलाई राखिने ज्योतिषी दृष्टिकोणबाट निधो भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ – “उत्तरायनलाई शुभ (देव) महिना र दक्षिणायनलाई (अशुभ) महिना मानिन्छ ।”
‘याकः मिसा भुज्याः’
‘याकः मिसा भुज्याः’ अर्थात महिलाले रथ तान्ने दिन तामझामका साथ जात्रा हुन्छ । इटिटोलमा रहेको रथलाई महिलाले तानेर थट्टिटोलसम्म पुर्याउँछन् । यो एकल महिलाको जात्रा हो ।
मछिन्द्रनाथको कीर्तिपुरमा रहेकी प्रेमिकाको स्मरणमा जात्रा मनाउने गरिन्छ । पहिले एकल महिलाले रथ तान्ने भनिए पनि अहिले सबै खालका महिला सहभागी हुन्छन् । उहाँले भन्नुभयो – “रथ यात्राका विभिन्न खालका पक्ष मध्ये यो पनि एक हो ।”
सम्झनामा रथ यात्रा :
त्यसो त यी तीनै जनाको सम्झनामा रथ यात्रा हुने गर्छ । त्रिलोक भनिने मछिन्द्रनाथको रथयात्रामा पुल्चोकबाट गाःबहालसम्म गुरु बन्धुदत्त बज्राचार्यको, गाःबहालबाट सुन्धारासम्मको यात्रा भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेवको र सुन्धाराबाट लगनखेलसम्मको यात्रा किसान ललित रथचक्रको स्मरणमा हुने गरेको छ ।
अहिले पनि पुल्चोकबाट गाःबहालसम्मको जात्रालाई काठमाडौँवासीको र गाःबहालबाट सुन्धारासम्मको जात्रालाई भक्तपुरवासीको जात्रा भनिन्छ ।
पहिले काठमाडौँवासी र भक्तपुरवासी आ–आफ्नो पालामा रथ तान्न आउँथे । अहिले धेरै वर्ष भयो उनीहरुले रथ तान्न छाडेको । ज्यापु समाज यलले नै रथ तान्ने जिम्मेवारी लिएको छ । रथ तान्ने मात्रै नभएर सुरक्षित रुपमा भनिएको ठाउँमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले समाजले तान्नु सकारात्मक भएको जोशीले बताउनुभयो ।
पहिले पहिले रथ तान्ने काम लगाम नभएको घोडा जस्तो थियो । स्थानीयवासी राति अबेरसम्म रथ तान्दथे । पहिले रथ ढल्कने हुँदा दुर्घटनाको डर थियो । समाजले जिम्मेवारी लिएपछि अहिले व्यवस्थित बनेको छ । उहाँ भन्नुभयो – “ज्यापु समाजले तान्न थालेसँगै रथ तान्ने काम व्यवस्थित बनेको छ । अहिले रथ ढल्केको जस्ता अप्रिय कुरा सुन्नु परेको छैन ।”
रकमेहरुको कार्यालयमा बाक्लो उपस्थिति :
मछिन्द्रनाथ जात्राको तयारीका लागि गुठी संस्थान झण्डै वर्षभर नै लाग्ने गर्छ । पहिलो दुई-चार महिना कागजी काममै लाग्ने गर्छ । त्यसपछि कार्यालयले आवश्यकताअनुसार रकमेलाई परिचालन गरेर काम अघि बढाउँछ । देवतालाई पाटन ल्याएदेखि नै रकमेहरुको कार्यालयमा बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ ।